Contact & FAQ – Ministry of Health
ဟုတ်ဆရာ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးက တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ပစ္စည်းတစ်မျိုးတိုင်းအတွက် တင်ဒါ form ၅၀၀၀၀ကျပ်ပေးသွင်း၍ Scan ဖတ်၍ပေးပို့ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Specification က Envelope (A) တွင်ဖော်ပြရမှာလားဆရာ?
SHWE HTAY MIN CO.,LTD.
PH : 095185881
I would like to know all tender form fees 50000 ks or each 50000 ks.
Zin Mar Nyunt
How to pay for Tender fees?
Glorious Light Trading Co.,Ltd
4. AA Medical Co.,Ltd
တင်ဒါအောင်မြင်သူများနံပါတ်(၂၅) (ဃ) တွင် သတ်မှတ်ချိန်ကို တင်ဒါအောင်စာရင်း ထွက်ရှိပီး/ စျေးနုန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပီးနောက် email ဖြင့် အမှာစာပေးပို့သည့်ရက်တွင် စတင်ရေတွက်ပါမည် ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည် ထိုအမှာစာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ/ ဆေးရုံများနှင့် ဝယ်ယူရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် တင်ဒါအောင်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ၏ အရေအတွက်ပါ ဖော်ပြပါ ရှိပါမည်လားကို သိရှိလိုသည် ဆရာရှင့်
5. Zar Chi , Five Oceans Co.Ltd
In Website, we have to provide (2)emails – (1) for User registration and (1) for company registration. We could log in with both account. Please, help to answer which account should we use for tender form submission.
6. Ma Phyoe Than Dar Ko, Sale & Marketing
တင်ဒါအတွက် ချလန်ပေးသွင်းရာတွင် မိမိအမည်ဖြင့် ဘဏ်တွင် ပေးသွင်းမိနေသော ကြောင့် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပြန်ပြင်ရန် လိုအပ်ပါသလားရှင့်
7. Treasure Pharma Co.,Ltd
တင်ဒါဖောင် ပေးပို့ရမည့် Admin , GMP , Technical & Envelop A ပေးပို့ရမည့် Email Address ကဘယ်မှာရှာရမလဲရှင်
Aye Nandar, Glorious Light Co.,Ltd
တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းထားသော ချလန် PDF file ကို ပို့ပေးရမယ့် email address လေးသိချင်ပါတယ်။ မူရင်းကိုလည်း ရုံးအမှတ် ၄ နေပြည်တော်ကို ပို့ပေးရမှာလားရှင်။
U Mg Mg Oo, GOLD OASIS Co., Ltd
I am Register the Company Register and Tender Form 50,000 Kyats to Bank.
1. Where i will be showing the Bank form money submitted slip to show?
2. I cannot download the tender form Why?
8. Nyein Wint Aung, SHWE SIN MIN COMPANY LTD
နေပြည်တော် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် တင်ဒါဖောင်ဖိုး သွားရောက်သွင်းတာ လက်မခံလို့ပါရှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲလက်မှတ် နှင့် MD 013512 တံဆိပ်ပါမှ လက်ခံမည် ဟု ပြောပါသည်ရှင့် ဘယ်လို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေး ပါရှင့်
9. U Mg Mg Oo, GOLD OASIS Co., Ltd
We want to know bank account MD number (Myanmar Economic Banks). And also which bank will be submitted to 50,000 kyats of tender form.
Also, when we contact to procurement office phone to be helping something, they said that they don’t know and give us 09″&”- 2133307 but when we call that phone number not pick up and reply. Finally Switch off the phone. So, how could we doing the process and procedure from your advertisement officially.
10. Neela, Model Pharma Co.ltd
I am Daw Neela, Model Pharma Co.,ltd. I would like to get the download link, we already registered it.
Adapt Advertising Co., Ltd
Please we would like to request tender downlink to download documents for this project. And allow me to bid in this projects.
Htay Kyaw, Bagan Lifesciences Co.Ltd
We submitted registiration form last week. Not received link yet. Please recheck and sent htay.kyaw01@gmail.com sir.
BINAYENDRA SAHA ROY, PACIFIC MEDICAL INDUSTRIES LTD
I have finished company registration but did not receive activation mail to proceed further
11. U San Shwe Maung, Top Winner Trading Co.,Ltd
Can we participate Probiotics in capsule form instead of Sachet form as stated in tender?
12. Zin Mar Nyunt, Mega Lifesciences Ltd
All Tender form Fees-50000 ks ???or respective forms—50000 ks???
Dr. Myint Myint Aye, Great Wall Myanmar Pharmaceutical Co.,Ltd
တင်ဒါအမှတ် cutd.1.dph (2020-2021) မှ Tender List ကို download လုပ်နိုင်ရန် တင်ဒါဖောင်ဖိုး မည်မျှပေးသွင်းရမည်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။ (Company Registration လုပ်ပြီးပါပြီ)
13. Shein Tet Trading
တင်ဒါတင်သွင်းရာတွေ item (၁) မျိုး အတွက် ပစ္စည်း Brand (၁) မျိုးကိုသာ တင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းတွင် packaging (၂) မျိုးရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Tender premium အား brand (၁) မျိုးတည်းကိုသာ packaging (၂) မျိုးဖြင့် တင်သွင်း မည် ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကြိမ်သာေပးသွင်းလို့ရပါသလား။
14. Ma Thin Thin Shwe, Global Service Interlink Co.,Ltd
Etender register တင်ရာတွင် User & Password mail ထဲသို့ ဝင်လာပြီး company mail သို့ link ပို့ထားသည့်အတိုင်းဝင်၍ profile အား ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ထားပြီးလျှင် register တင်တာ ပြီဂမပြီး သိချင်လို့ပါရှင့်။Register တင်ထားတာပြီးစိးလျှင် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် ဖောင်အတွက်မှသာ ပရီမီယံကြေး (MD-013051)သို့ ပေးသွင်းရမှာလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Global Service Interlink Co.,Ltd
15. Zin Mar Nyunt, Mega Lifesciences Ltd
1.Let me know Quality document in Form B, what you mean for that and then for Group 1,2,3,4 combined tender, will we put to Premium PO (3) cheque for oral-1,inj-1,LPO-1 ?
2.Let me know supplier/contractor user ID Email and then Email address for quotation soft copy.
16. JDS Co.,Ltd (Portfolio-II) ကပါ။ Tender Premium PO Cheque လုပ်တဲ့အခါ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာ လုပ်လို့ရပါသလားရှင့်“
17. Shein Tet Trading Questions
17.1. စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “J”column တွင်ဖြည့်ရမည့် unit price တွင် ပူးတွဲဖော်ပြပါ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကို ပို့ပေးမည့် Transport Charges များပါသည့် စျေးနှုန်းကို ဖြည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) Company ကရောင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး စျေးနှုန်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကို ပို့ပေးမည့် transport charges များ မပါသည့် စျေးနှုန်း ကိုဖြည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
17.2. စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “L” column တွင်ဖြည့်ရမည့် Transport Charges တွင် Column “J” unit price မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စျေးနှုန်း ထဲမှာပါတဲ့ Transport Charges ကို သီးသန့် ကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
17.3. စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “n” column တွင်ဖြည့်ရမည့် အနည်းဆုံးမှာရမည့်အရေအတွက် Min Stock to be ordered တွင် ၁နှစ်လုံးစာအတွက် အနည်းဆုံးမှာရမည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ဆေးရုံတွေမှ ကုန်အမှာစာရမည့် အကြိမ်တိုင်း တွင်အနည်းဆုံးမှာရမည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
17.4. စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “o” column တွင်ဖြည့်ရမည့် အများဆုံးမှာတင်သွင်းနိုင်မည့်အရေအတွက် Max Stock to be offered တွင် ၁နှစ်လုံးစာအတွက် အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဆေးရုံတွေမှ ကုန်အမှာစာရမည့် အကြိမ်တိုင်း တွင်အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
17.5. တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်ထားတော့ email သို့ ပေးပို့ရာတွေ Admin, GMP, Technical-1 နှင့် Envelope A များသို့ သတ်မှတ်ထားသော email အသီးသီးသို့ ပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ သို့ရာတွင် စာမျက်နှာ ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော “သတိပြုရန်အချက်” တွင် “မိမိemail မှ soft copy ဖြင့် ပေးပို့ပါက လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ” ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် ဘယ်လိုတင်သွင်းရမည်ကို ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
17.6. စာမျက်နှာ ၇ – အချက် ၁၇။ တွင် ဖော်ပြထားသော “တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းစာရင်းချုပ်” ဆိုတာ မည်သည့် စာရွက် စာတမ်းကို ဆိုလိုတာပါသလဲခင်ဗျာ။ Email နှင့် ပို့ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ Admin, GMP, Technical-1 နှင့် Envelop A ကိုပါ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့် ပေးပို့ရာတွင် ထည့်သွင်းပေးရမလားခင်ဗျာ။”
18. Great Wall Myanmar Pharmaceutical Co.,Ltd
Ques: ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ် တင်ဒါပေးသွင်းခဲ့မှု အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ထောက်ခံချက် ဆိုရာတွင် ယခင်တင်ဒါတင်သွင်းခဲ့သော ဆေးရုံအားလုံးနှင့် ပြည်နယ်နှင့််တိုင်းကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် တစ်ခုချင်းထောက်ခံချက်တောင်းရန် လိုအပ် ပါသလားရှင့်
19. Question: တင်ဒါ ဖောင်ကြေးချလံ (မူရင်း) ၊တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O) မူရင်း နှင့် Cold Chain ဆေး Sample များကို နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၄)သို့ လူကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ပေးပို့လျှင်ရပါသလား?”
20. Question: Medicine Tender-Liquid, Powder, Ointment Group-1 ထဲက ပစ္စည်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချင်ပါတယ်။ Sr.5, Chlorhexadine 7.1% Antiseptic Solution 100ml မှာ ယခင်နှစ် မှာယူနေကျ Chlorhexadine 7.1% Antiseptic Solution 10ml သာ မှာယူနေခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင် 100ml ဖြစ်နေပါသဖြင့် ကွာခြားမှု ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါသည်“
21. Question: တင်ဒါအမှတ် – cutd.1.dph(2020-21) တွင် Delivery ပေးပို့ရမည့်နေရာများကို Group (1,2,3,4) ဟု Tender Form မှာ ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါသည်။ ဆေးစာရင်း List Group အမျိုးအစားတွင် Oral Group-1,Injection Group-1 & LPO Group-1 ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ Oral Group-1 ကို (Group-1) , Inj Group-1 ကို (Group-2) ဟု သတ်မှတ်ထားတာလား သိချင်လို့ပါဆရာ။
22. Question: နေပြည်တော် ရုံးအမှတ် (၄) သို့ Hard Copy များ ပို့သည့်အခါ Tender Premium (PO) Cheque များ နှင့် Tender Form ကြေးသွင်းထားသော ဘဏ် စာရွက်များသာ ပေးပို့ရမည်လား ?
E-mail တွင် ပေးပို့ရသည့် Profile, GMP, Technical, စသည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို Hard Copy ပေးပို့ရမည်လား ? ဖြေကြားပေးပါ ဆရာခင်ဗျာ။“
23. Question: “ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ Column g တွင်ဖော်ပြထားသော Shelf Life အား (e.g 1year/2years) စသည်ဖြင့် ၎င်းတစ်မျိုးတည်းသာဖော်ပြပေးရမည်လား (သို့) ၎င်းအပြင် Expriy Date ကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသလားဆရာရှင့်.”
24. Question: Form B မှ Batch No နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
Zoom Meeting, အကြံပေးပညာရှင် ပြောကြားချက်အရ တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်း ရောက်ရှိလာသောအခါ ၎င်း၏ Batch No ကို ယခုဖောင်တွင်ဖြည့်ထားသော Batch No နှင့်ပြောင်းလဲ၍ Correction ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း နားလည်သဘော ပေါက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Confirm လုပ်လိုပါသည်။
25. Question: တင်ဒါအောင်မြင်ဖူးသည့်အထောက်အထားကို Admin or GMP
Tender Cover Letter စုစုပေါင်း တစ်စောင်လား၊ Item တစ်မျိုးကိုတစ်စောင်ရေးရမှာပါလား
ဥပမာ Item အမျိုး ၃၀ ပြိုင်လျှင်တစ်စောင်သာရေးရမှာလား၊အစောင် ၃၀ ရေးရမှာလားသိချင်လို့ပါရှင့်။
26. Question: ကျွန်တော်များ တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းသည် Food Supplement ဖြစ်သောကြောင့် FDA တွင် ၃ ပတ်မှ ၁လ စောင့်စိုင်းရသဖြင့် ဆေးဝါးတင်သွင်းသူများနည်းတူ ၃ လအချိန်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရမည်မှာ အခက်အခဲရှိပါသဖြင့် Food Supplement တင်သွင်းသူများအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများရှိနိုင်ပါသလား?
27. Ques : မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျာ
Brand တစ်မျိုးထဲ option နှစ်မျိုးကိုunit price နှစ်မျိုး နှင့်ပြိုင်ပါက P.O နှစ်ခါ တင်ဖို့ လိုအပ်ပါလား ခင်ဗျာ?
28. Ques : We are already paid fees for Tender Form, where we can upload scan file bank slip.
Please kindly reply for this.
29. Ques : Envelope A အတွက် Password ကို ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေ့၊ ဘယ် Email ကိုပို့ရမှာလည်း၊ ယခင် price form(A) ပို့တဲ့ Link?
30. Ques : တင္ဒါ (P.O) အာမခံေၾကးအား ဘဏ္အမွတ္(၆) ထံ (၁၈.၁.၂၀၂၁)တြင္ ေပါင္းသြင္း လိုက္မိပါသည္။ ပစၥည္း(၁)ခုျခင္းစီ အတြက္ အာမခံေၾကး (P.O) အား ခြဲသြင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသလား။
31. Ques : တင်ဒါ ဖေါင်ဖိုးပေးသွင်းရန် ဘယ်ဘဏ်ကပေးသွင်းလို့ရပါသဘဲဗျ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်(၂) ကလက်မခံလို့ပါ၊ MD -013051 မသိလို့လက်မခံဘူးဖြစ်နေတယ်။
32. Ques : ဆရာရှင့် ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီမှ တင်ဒါအတွက် Mail များကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနများထံ အသီးသီး ပေးပို့နေရာတွင် နောက်ဆုံးပေးပို့ရန်ကျန်ရှိသော Envelope A အတွက် 390KB နှင့် Technical အတွက် 21.4 MB ရှိသော file2ခုမှာ ညနေ ၅ နာရီမှ ည 8နာရီခွဲ အထိ sending ဖြစ်နေပါသည်။ ဖိုင်ရောက်ရှိ ကြောင်းအတည်မပြုနိုင်သေးပါ။ မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
33. Ques : ကျွန်မတို့ ကုမ္ပဏီမှ cutd.1.dph(2020-2021) Tender ကို Group အလိုက် e-mail နဲ့ Submit ပြီးပါပြီ။ Mail Successful ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုသိရမလဲရှင့်။ Zoom Meeting မှပြောတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ကြည့်တာတော့ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနကိုမေးခိုင်းပါတယ်။ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာန က ကွန်ပျူတာဌာနကိုပြန်ဆက်ခိုင်းနေတော့ e-mail Successful ဖြစ်ကြောင်းကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ လေးစားစွာဖြင့်
34. Ques : 19-1-2021ရက်နေ့မှာ cutd.1.dph(2020-21)Tender အတွက် 1.Admin mail, 2.GMP mail, 3.Technical mail, 4.Envelope mailများ ပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Email ရောက်/မရောက်ကို အကြောင်း ပြန်ပေးပါသလားရှင်။
35. Ques : တင်ဒါအမှတ် cutd.3dph ၏ Tender Code – Tk14 ( Urine test strips)တွင် မည်သည့် parameter (eg. 2para/ 3para /11para)အားရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြောင်း သိလိုပါသဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရန် တောင်းခံအပ်ပါသည်။
36. Ques : အပိုဒ်(၁၅)တွင် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းတမျိုးချင်းအတွက် စျေးနှုန်းကို သတ်မှတ်စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာပုံစံဖြင့် တင်သွင်းရမည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Brand မတူသည့် ဆေးပစ္စည်း item အား Form A ကို ၁ ဖိုင်စီ ခွဲ၍တင်သွင်းရမည်လား သို့မဟုတ် Form A (Excel File) တခုတည်းတွင်သာ ထို Brand2ခုအားဖော်ပြရမည်လား
37. Ques: Form A ,Column (c) Option နေရာတွင်မည်သည်ကို ဖော်ပြရမည်နည်း။
ဆေးပစ္စည်းတမျိုးတည်း၏Brand မတူသည်ကို ဖော်ပြရမည်လား သို့မဟုတ် Brand တူပီး Packing
38. Ques: cutd.3.dph(20-21)တင်ဒါမှာ ခေါ်ထားတဲ့ Lot:Consu2 ,Malathion 95% w/v ULV (25liter/Drum) Estimate Quantity 3000/ မှာထားပါတယ်။ မှာထားတဲ့ Quantity အရေအတွက် က Liter 3000? လား 25liter ဆံ့ Drum 3000?လားဆိုတာ သိချင်ပါတယ် ရှင်
39. Ques: Cutd-3တင်ဒါမှ Reagent Group 1 မှာရှိတဲ့ Lot2အတွက် PO ကြေးကို 120,000 သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပါတယ် ဒါပေမဲ့ Reagent Group 1 မှာရှိတဲ့
Lot4အတွက် PO ကြေးကိုတော့ (3,4,5) အတွက် သက်မှတ်ထားသော tender Premium လို့ပဲပါပြီး Lot4တစ်ခုထဲအတွက် tender Premium ဆိုပြီး မ ဖော်ပြထားဘူးဖြစ်နေပါတယ်၊ Lot4ပဲယှဉ်ပြိုင်လိုပါက tender Premium မည်မျှသွင်းရမည် ကိုသိလိုပါတယ်ရှင့်၊ 1% တွက်ချက်၍ သွင်းရမှာပါလား
40. Ques: Lot တစ်ခု ထဲမှာရှိတဲ့ Items တွေအားလုံးပြိုင်ရမှာလား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Items ကိုပဲ ရွေးပြိုင်လို့ ရပါလားရှင့်
41. Ques: ဈေးနှုန်းဝန်ခံကတိလွှာကို လက်ရေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ scan file ကို ပို့ပေးရမှာပါလား/ မဟုတ်ရင် ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ Typing ရိုက်ပြီး ထည့်သွင်းထားတဲ့ soft copy file ကို ပို့ပေးရမှာလားရှင့်
42. Ques: Cutd.3 အတွက် Test Kits နမူနာ တစ်မျိုး ၅ ဗူး ကို ရုံးအမှတ် (၄) နေပြည်တော်နှင့်ရန်ကုန် ဗဟိုဆေးသို လှောင်ရေးဌာနသို့ တင်ဒါပိတ်သိမ်းချိန်အတွင်း အရောက် ပေးပို့ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ပေးပို့ရာတွင် ရန်ကုန်ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာနကို Test kit နမူနာ ၅ ဗူး ပေးပို့ပြီးပါက ရုံးအမှတ် (၄) နေပြည်တော်သို့ နောက်ထပ် Test kit နမူနာ ၅ ဗူး ပေးပို့ရန် လိုအပ်သေးပါသလား ခင်ဗျာ။
တင်ဒါအမှတ် – cutd.1.dph(2020-2021)တွင် တင်ဒါ အုပ်စု (၃)စု ပါဝင်ပါသည်၊
တင်ဒါဖောင်ကြေး– တင်ဒါ အုပ်စု (၁) အုပ်စုစီ အတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေး ငါးသောင်းကျပ်စီ သတ်မှတ်ထားပါသည်။
၁. Medicine Tender – Oral Group-1 Tender Form Price for Oral1 to Oral44 – 50000Kyats
၂. Medicine Tender – Inj Group-1 Tender Form Price for Inj1 to Inj21 – 50000Kyats
၃. Medicine Tender – Liquid,Powder,Ointment Group-1 Tender Form Price for LPO1 to LPO31 50000Kyats
1. Oral Group-1 အတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေး ငါးသောင်းကျပ် တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ငါးသောင်းကျပ် ပေးသွင်းပြီးပါက ၎င်း အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည့် Oral Items (၄၄)မျိုးအနက် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် Oral Items တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ တင်သွင်းနိုင်သည်။(တင်ဒါ ဖောင်ကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။)
2. Inj Group-1 အတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေး ငါးသောင်းကျပ် တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
– ငါးသောင်းကျပ် ပေးသွင်းပြီးပါက ၎င်း အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည့် – Inj Items ( ၂၁)မျိုးအနက် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် Inj Items တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ တင်သွင်းနိုင်သည်။(တင်ဒါ ဖောင်ကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။)
Liquid,Powder,Ointment Group-1 အတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေး ငါးသောင်းကျပ် တစ်ကြိမ် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
– ငါးသောင်းကျပ် ပေးသွင်းပြီးပါက ၎င်း အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည့် – LPO Items (၃၁)မျိုးအနက် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် LPO Items တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို၍ဖြစ်စေ၊ အားလုံးဖြစ်စေ တင်သွင်းနိုင်သည်။(တင်ဒါ ဖောင်ကြေး ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။)
တင်ဒါတင်သွင်းသည့် Items တစ်မျိုးချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်Tender Premium အလိုက် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သွင်းသူများမှ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ အပိုဒ် ၄။ (ဃ)၊ တွင် တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံ၊ တင်ဒါအာမခံကြေး ချလံနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်ကို ဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ် ပါသည်။ အပိုဒ် ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇တို့တွင်လည်းဖော်ပြထားပါသည်။
၄။ (ဃ) တင်သွင်းပစည်းအုပ်စုအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံ၊ တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်း အတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးချလံ scan pdf file ဖြင့် upload ဆောင်ရွက်ရမည့်အပြင်၊ Original Hard Copy များကို သတ်မှတ်နေရာသို့ သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း မှတ်ပုံတင် ချောစာဖြင့် ပေးပို့ရမည် ဖြစ်သည်။ ပစည်းတစ်မျိုးစီအတွက် ဖော်ပြ၍ ပေးသွင်းရမည်။ မှားယွင်းပေးသွင်းမှုများအတွက် တင်ဒါတင်သွင်းခွင့် ငြင်းပယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါဖောင်ကြေးကို တင်ဒါ အုပ်စု (၁)အုပ်စုစီအတွက် တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံတွင် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် တင်ဒါအုပ်စုဖော်ပြ၍ ငါးသောင်းကျပ်စီ ပေးသွင်းရမည်။
Specification က Envelope (A) တွင်ဖော်ပြရမှာလားဆရာ?
တင်ဒါတင်သွင်းသူများမှ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများအပိုဒ် ၁၉။ (ခ)နှင့် (ဂ) တွင် Specification နှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါခေါင်းစဉ်များအောက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
Envelope (A)တွင် ဈေးနှုန်းတင်သွင်းရန်သာ ဖြစ်ပြီး တင်ဒါတင်သွင်းသူများမှ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများ အပိုဒ် ၁၂၊ ၁၃ တို့တွင် ဇယားနှင့်တကွ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
3. How to pay for Tender fees?
တင်ဒါတင်သွင်းသူများမှ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ အပိုဒ် ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ တို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၁၅။ တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း အုပ်စုအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါဖောင်ဖိုး ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ချလံတစ်စောင်စီဖြင့် သတ်မှတ် (MD-013051)သို့ ပေးသွင်း ရမည်။ တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းအလိုက် တင်ဒါဖောင်ဖိုး ပေးသွင်း ထားသည့် ချလံ scan pdf file အား ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာအချက်အလက်များပေးပို့သည့် email တွင် ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ Original Hard Copyဖြင့် သတ်မှတ်နေရာသို့ သတ်မှတ်အချိန် အတွင်း ချိတ်ပိတ်တင်သွင်းရန် မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့် အရောက်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၆။ တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်သည့် ကုမ္ပဏီများသည်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီအတွက် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ တွက်ချက်ထားသောခန့်မှန်းတန်ဖိုး၏ (၁)%နှင့် အနီးစပ်ဆုံး သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါအာမခံကြေးကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အသိအမှတ်ပြုဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ပေးသွင်းပြီး scan pdf file အား ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေးပို့သည့် email တွင် ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။
၁၇။ တင်ဒါတင်သွင်းပစည်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံ၊ တင်ဒါ အာမခံကြေး ချလံ Original တို့ကို ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တင်သွင်းသည့် ပစည်းစာရင်းချုပ်၊ တင်ဒါ ဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေးငွေစာရင်းချုပ် တို့ကို ရုံးအမှတ်(၄)နေပြည်တော် ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေး ဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်)သို့ သတ်မှတ်အချိန် အတွင်း မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့် အရောက်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို သိရှိနိင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
4.တင်ဒါအောင်မြင်သူများနံပါတ်(၂၅) (ဃ) တွင် သတ်မှတ်ချိန်ကို တင်ဒါအောင်စာရင်း ထွက်ရှိပီး/ စျေးနုန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပီးနောက် email ဖြင့် အမှာစာပေးပို့သည့်ရက်တွင် စတင်ရေတွက်ပါမည် ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည် ထိုအမှာစာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ/ ဆေးရုံများနှင့် ဝယ်ယူရေး စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် တင်ဒါအောင်ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ၏ အရေအတွက်ပါ ဖော်ပြပါ ရှိပါမည်လားကို သိရှိလိုသည် ဆရာရှင့်
AA Medical Product Co.,Ltd
(၁) ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူစဉ်က ဖော်ပြထားသော တစ်နှစ်စာ ခန့်မှန်းအရေအတွက်ပေါ်တွင်အခြေခံပါသည်။
(၂) အမှာစာတွင် တင်ဒါအောင် ပစ္စည်းအမျိုးအစား (ပ)ကြိမ် ဝယ်ယူမည့် အရေအတွက် ဖော်ပြပါရှိပါမည်။ တင်ဒါလမ်းညွှန်နံပါတ် (၂၅) အပိုဒ်(ဂ)တွင် အမှာစာပေးပို့မည့် အချိန်နှင့် ပစ္စည်း ပေးသွင်းရမည့် အချိန်များဖော်ပြထားပါသည်။ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲ၍ အမှာစာပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး အမှာစာပေးပို့တိုင်း အရေအတွက်ပါ ဖော်ပြပါရှိပါမည်။
Instruction စာပိုဒ် (၄) (စ) တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါအတွက် ချလန်ပေးသွင်းရာတွင် မိမိအမည်ဖြင့် ဘဏ်တွင် ပေးသွင်းမိနေသောကြောင့် ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပြန်ပြင်ရန် လိုအပ်ပါသလားရှင့်
ချလန်တွင် ကုမ္ပဏီအမည်ရေး၍ upload ပြန်လုပ်ပေးပါ
တင်ဒါဖောင် ပေးပို့ရမည့် Admin , GMP , Technical & Envelop A ပေးပို့ရမည့် Email Address ကဘယ်မှာရှာရမလဲရှင်
တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းထားသော ချလန် PDF file ကို ပို့ပေးရမယ့် email address လေးသိချင်ပါတယ်။ မူရင်းကိုလည်း ရုံးအမှတ် ၄ နေပြည်တော်ကို ပို့ပေးရမှာလားရှင်။
Tender list portion ၏ download tender form and bidder registration တွင် “ငွေသွင်းချလန်မိတ္တူအား တင်သွင်းရန်” Box ပါရှိပါသည်။
နေပြည်တော် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် တင်ဒါဖောင်ဖိုး သွားရောက်သွင်းတာလက်မခံလို့ပါရှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲလက်မှတ် နှင့် MD 013512 တံဆိပ်ပါမှ လက်ခံမည် ဟု ပြောပါသည်ရှင့် ဘယ်လို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို လမ်းညွှန်ပေး ပါရှင့်
Tender instruction စာရွက်ကိုပြသ၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အခြားကုမ္ပဏီများမှလည်း နေပြည်တော်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် တင်ဒါဖောင်ဖိုးများ ပေးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Tender Instruction စာပိုဒ် (၁၅) တွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
User Registration တွင် error ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါရန်။ Activation Email ပြန်လည် ရောက်ရှိပါက ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော ပုံသဏ္ဍာန်/ထုပ်ပိုးမှုဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသောအရည်အသွေးနှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိနှင့် အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှုများအား ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါအမှတ် cutd.1.dph (2020-2021) မှ Tender List ကို download လုပ်နိုင်ရန်တင်ဒါဖောင်ဖိုး မည်မျှပေးသွင်းရမည်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်။ (Company Registration လုပ်ပြီးပါပြီ)
FAQ session တွင် ဖြေဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သွင်းရာတွေ item (၁) မျိုး အတွက် ပစ္စည်း Brand (၁) မျိုးကိုသာတင်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းတွင် packaging (၂) မျိုးရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ Tender premium အား brand (၁) မျိုးတည်းကိုသာ packaging (၂) မျိုးဖြင့် တင်သွင်း မည် ဖြစ်သောကြောင့် တစ်ကြိမ်သာပေးသွင်းလို့ရပါသလား။
Brand ကွဲမှသာ offer ခွဲ၍ တင်သွင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ Packaging ကွဲပါက Envelope (A) တွင် option ဖြင့် တင်ပြပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
Etender register တင်ရာတွင် User & Password mail ထဲသို့ ဝင်လာပြီး company mail သို့ link ပို့ထားသည့်အတိုင်းဝင်၍ profile အား ဝင်ရောက်ဖြည့်စွက်ထားပြီးလျှင် register တင်တာ ပြီဂမပြီး သိချင်လို့ပါရှင့်။Register တင်ထားတာပြီးစိးလျှင် တင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် ဖောင်အတွက်မှသာ ပရီမီယံကြေး (MD-013051)သို့ ပေးသွင်းရမှာလား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Registered Company List တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ FAQ Answer (1) တွင်ဖြေဆိုပြီးဖြစ်ပါသည်။
Form Submission session ၏ Page2and3တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
Tender Instruction အပိုဒ်(၁၆)တွင် တင်ဒါအာမခံကြေးကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အသိအမှတ်ပြုဘဏ် တစ်ခုခုတွင် ပေးသွင်းရန် ဖော်ပြပါရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ Tender Premium PO Cheque ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အသိအမှတ်ပြု ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွင် ဆောင်ရွက်၍ ရနိုင်ပါသည်။
၁။ စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “J”column တွင်ဖြည့်ရမည့် unit price တွင် ပူးတွဲဖော်ပြပါ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကို ပို့ပေးမည့် Transport Charges များပါသည့် စျေးနှုန်းကို ဖြည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) Company ကရောင်းနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး စျေးနှုန်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကို ပို့ပေးမည့် transport charges များ မပါသည့် စျေးနှုန်း ကိုဖြည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
Tender Instruction အပိုဒ်(၁၁)တွင် တင်ဒါတင်သွင်းမည့် စျေးနှုန်းလွှာတွင်ပါဝင်သည့် စျေးနှုန်းသည် သတ်မှတ်ထားသော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ အတွင်းရှိ မြို့နယ်များသို့ ပို့ဆောင်နိုင်သော စျေးနှုန်း ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
သို့ဖြစ်၍ စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “J”column တွင်ဖြည့်ရမည့် unit price တွင် ပူးတွဲဖော်ပြပါ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများကို ပို့ပေးမည့် Transport Charges များပါသည့် စျေးနှုန်းကို ဖြည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါ သည်။
၂။ စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “L” column တွင်ဖြည့်ရမည့် Transport Charges တွင် Column “J” unit price မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စျေးနှုန်း ထဲမှာပါတဲ့ Transport Charges ကို သီးသန့် ကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
Tender Instruction အပိုဒ်(၁၂)တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပုံစံ Form A “L” column တွင်ဖြည့်ရမည့် Transport Charges တွင် Column “J” unit price မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စျေးနှုန်း ထဲမှာပါတဲ့ Transport Charges ကို သီးသန့် ကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးရပါမည်။
၃။ စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “n” column တွင်ဖြည့်ရမည့် အနည်းဆုံးမှာရမည့်အရေအတွက် Min Stock to be ordered တွင် ၁နှစ်လုံးစာအတွက် အနည်းဆုံးမှာရမည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ဆေးရုံတွေမှ ကုန်အမှာစာရမည့် အကြိမ်တိုင်း တွင်အနည်းဆုံးမှာရမည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
သယ်ယူပို့ဆောင်ခပါဝင်ပြီး ဈေးနှုန်းအတွက် Minimal Stock to be ordered ကို ဖော်ပြခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။
တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ပေးသွင်းမှုအတွက်ဖြစ်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးစာအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်/ဆေးရုံများမှ ကုန်အမှာစာရမည့် အကြိမ်တိုင်း တွင်အနည်းဆုံးမှာရမည့် အရေအတွက် ရှိလျှင် Remark ၌ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
Tender Instruction အပိုဒ်(၁၂)တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
၄။ စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ ပုံစံ Form A “o” column တွင်ဖြည့်ရမည့် အများဆုံးမှာတင်သွင်းနိုင်မည့်အရေအတွက် Max Stock to be offered တွင် ၁နှစ်လုံးစာအတွက် အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလား (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ဆေးရုံတွေမှ ကုန်အမှာစာရမည့် အကြိမ်တိုင်း တွင်အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရမှာလားခင်ဗျာ။
အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့်အရေအတွက် Max Stock to be offered တွင် ၁နှစ်လုံးစာအတွက် အများဆုံးတင်သွင်းနိုင်မည့် အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရပါမည်။
တင်ဒါယှဉ်ပြိုင်ပေးသွင်းနိုင်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးစာအတွက် အများဆုံးအရေအတွက်ကို ဖော်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၅။ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်ထားတော့ email သို့ ပေးပို့ရာတွေ Admin, GMP, Technical-1 နှင့် Envelope A များသို့ သတ်မှတ်ထားသော email အသီးသီးသို့ ပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ သို့ရာတွင် စာမျက်နှာ ၃ တွင် ဖော်ပြထားသော “သတိပြုရန်အချက်” တွင် “မိမိemail မှ soft copy ဖြင့် ပေးပို့ပါက လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ” ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် ဘယ်လိုတင်သွင်းရမည်ကို ညွှန်ကြားပေးပါခင်ဗျာ။
MOHS e-Tender Website ရှိ Form Submission တွင် Click လုပ်ပါက လိပ်မူပေးပို့ရမည့် email address (တင်ဒါ အမှတ်စဉ်အလိုက် email address များ ပြောင်းလဲနေမည်ဖြစ်သည်) ပွင့်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသတ်မှတ်ထားသည့် email သို့ MOHS e-tender တွင် Registration လုပ်ထားသော email မှသာ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး အခြား email address မှ ဌာန email သို့ တိုက်ရိုက်တင်ပြပါက အကျုံးမဝင်ပါ။
၆။ စာမျက်နှာ ၇ – အချက် ၁၇။ တွင် ဖော်ပြထားသော “တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းစာရင်းချုပ်” ဆိုတာ မည်သည့် စာရွက် စာတမ်းကို ဆိုလိုတာပါသလဲခင်ဗျာ။ Email နှင့် ပို့ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ Admin, GMP, Technical-1 နှင့် Envelop A ကိုပါ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့် ပေးပို့ရာတွင် ထည့်သွင်းပေးရမလားခင်ဗျာ။”
“တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ပစ္စည်းစာရင်းချုပ်” ဆိုတာ- တင်သွင်းသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း (၅)မျိုးရှိလျှင် (၅)မျိုး၏ စာရင်းချုပ်ဇယား ပြုလုပ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
Email နှင့် ပို့ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ Admin, GMP, Technical-1 နှင့် Envelop A ကိုပါ မှတ်ပုံတင် ချောစာဖြင့် ပေးပို့ရာတွင် ထည့်သွင်းပေးရန်မလိုပါ။
Tender Instruction အပိုဒ်(၁၇)တွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း တင်ဒါတင်သွင်းပစည်းအတွက် သတ်မှတ် ထားသည့် တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံ၊ တင်ဒါအာမခံကြေးချလံ Original တို့ကို ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပေးသွင်းရ မည်ဖြစ်ပြီး တင်သွင်းသည့် ပစည်းစာရင်းချုပ်၊ တင်ဒါ ဖောင်ကြေး၊ တင်ဒါအာမခံကြေးငွေစာရင်းချုပ်တို့ကို ရုံးအမှတ်(၄)နေပြည်တော်၊ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်)သို့ သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ချော စာဖြင့် အရောက်ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Tender Instruction အပိုဒ်(၆)တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တင်ဒါပေးသွင်းခဲ့မှုမှတ်တမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်များမတင်ပြနိုင်ပါက ယင်းစာရွက်စာတမ်းများအစား ကုန်အမှာစာ (သို့မဟုတ်) ငွေပေးချေခြင်း အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါတင်သွင်းအောင်မြင်ခဲ့သည့်ဌာန၊ တင်သွင်းသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းအမည်၊ အရေအတွက်၊ဈေးနှုန်း၊ ခုနှစ်တို့ကို ဇယားဖြင့် ဖော်ပြလျှင် ရပါသည်။
Ans: တင်ဒါညွှန်ကြားလွှာ အပိုဒ် (၁ရ)တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း တင်ဒါ ဖောင်ကြေးချလံ (မူရင်း) ၊ တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O) မူရင်းများကို ရုံးအမှတ် (၄)နေပြည်တော်သို့ မှတ်ပုံတင်ချောစာဖြင့် ပေးပို့ရမည်။
ဆေး၊ Cold Chain ဆေး Sample များအား ရုံးအမှတ်(၄)နေပြည်တော် (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေး ဌာနသို့ လူကိုယ်တိုင်ပေးပို့ရမည်။
Ans: Chlorhaxadine 7.1% Antiseptic Solution 10 ml ဖြင့်သာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။ 100ml သည် Typing error ဖြစ်ပါသည်။
Ans: Delivery ပေးပို့ရမည့် Group (1,2,3,4)မှာ တင်ဒါညွှန်ကြားလွှာ အပိုဒ်(၇)တွင်ဖော်ပြထားသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အုပ်စု(၄)ခုကိုဆိုလိုပါသည်။
ဆေးစာရင်း List Group အမျိုးအစားသည် ဆေးစာရင်း Oral, Injection, LPO (Liquid, Powder, Ointment) group (၃)ခုခွဲ၍ တင်ဒါခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါအမှတ် – cutd.1.dph(2020-21) တွင် တင်ဒါခေါ်ယူဆေးစာရင်း အားလုံးကို Oral Group-1, Injection Group-1, LPO (Liquid, Powder, Ointment) Group-1 ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Ans: တင်ဒါညွှန်ကြားချက် အပိုဒ် (၁၇)တွင်ဖော်ပြထားသော တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံ၊ အာမခံကြေး ချလံနှင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဆေးပစ္စည်း အမျိုးအမည် အချုပ်ကိုသာ ပေးပို့ရမည်။
E-mail တွင် ပေးပို့ရသည့် Profile, GMP, Technical, စသည့် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို Hard Copy ပေးပို့ရန် မလိုပါ။
Ans: တင်သွင်းမည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း၏ Shelf life ကိုသာဖော်ပြရမည်။ Expriy Date ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။
တင်ဒါညွှန်ကြားချက် အပိုဒ် (၂၂)တွင် “တင်ဒါတင်သွင်းသောပစ္စည်းများ၏ သက်တမ်း (Expriy Date)သည် ပစ္စည်းတင်သွင်းသည့်နေ့တွင် ပစ္စည်းများ သက်တမ်း Shelf life ၏(၃/၄)ပုံ ကျန်ရှိရမည်။ ကျန်ရှိဆေးသက်တမ်းသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှသာ ငွေပေးချေမည်ဖြစ်သည်။ (Shelf life (၆)လသာ ရှိသော ဆေးဝါးများ၊ အထူးဆေးဝါးများ၊ Reagent များအား Expiry Date မတိုင်မီ အသစ် ပြန်လဲပေးရမည် (သို့မဟုတ်) အချိန်ခွဲ၍ ပေးသွင်းရမည်။)” ဟုပါရှိပါသည်။
Zoom Meeting , အကြံပေးပညာရှင် ပြောကြားချက်အရ တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်း ရောက်ရှိလာသောအခါ ၎င်း၏ Batch No ကို ယခုဖောင်တွင်ဖြည့်ထားသော Batch No နှင့်ပြောင်းလဲ၍ Correction ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း နားလည်သဘော ပေါက်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် Confirm လုပ်လိုပါသည်။
Ans: Exp date သက်တမ်းတူ (သို့မဟုတ်) သက်တမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်သော Batch number ဖြစ်ပါက ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
25. Question:တင်ဒါအောင်မြင်ဖူးသည့်အထောက်အထားကို Admin or GMP
Ans: တင်ဒါအောင်မြင်ဖူးသည့်အထောက်အထားကို Admin တွင်ထည့်သွင်းပေးရမည်။
တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သိရှိနားလည်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ဝန်ခံ ကတိပြုလွှာ
တစ်စောင်ကို Admin တွင်ထည့်သွင်း ဖော်ပြရမည်။
ဈေးနှုန်းဖော်ပြထားသည့် ဝန်ခံကတိပြုလွှာကိုသာ Item တမျိုးစီအတွက် Envelop A တွင် ထည့်သွင်း
ပြီးemail ပေးပို့ရမည်။
Ans: ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်သည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ပေးပို့ရမည့် အချိန်ကာလကို (၃)လဟုသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Ans : Brand တူပါက P.O တစ်စောင်သာ သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Ans : Home Page > Tender List > Bidder Registration > သက်ဆိုင်ရာ Tender အမှတ်စဉ်၏ Bidder Registration အောက်ဆုံး တွင် Bank ချလန် scan file upload ပြုလုပ်ရန် နေရာပါရှိပါသည်။
Ans : Envelope A ဖွင့်မည်နေ့တွင်တောင်းခံပါမည်။ Envelope A ဖွင့်မည့်နေ့အား Website တွင် (3) ရက် ကြိုတင်ကြေငြာပါမည်။
30. Ques : တင်ဒါ (P.O) အာမခံကြေးအား ဘဏ်အမှတ်(၆) ထံ (၁၈.၁.၂၀၂၁)တွင် ပေးသွင်းလိုက်မိပါသည်။ ပစ္စည်း (၁)ခုချင်းစီအတွက် အာမခံကြေး (P.O) အား ခွဲသွင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသလား။
Ans : (P.O) ပေါင်းသွင်း၍ရပါသည်။ သို့ရာတွင် PO သိမ်းဆည်းရသည့်ကိစ္စရပ်များ ပြေလည်စေရန် အတွက် တစ်စောင်စီသွင်းပါက ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဆေးအမျိုးအမည်အတွက် (P.O) စုစုပေါင်း စာရင်းချုပ်ထည့်ပေးရန်လိုပါသည်။
31. Ques : တင်ဒါဖေါင်ဖိုးပေးသွင်းရန် ဘယ်ဘဏ်ကပေးသွင်းလို့ရပါသဘဲဗျ၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်(၂) ကလက်မခံလို့ပါ၊ MD -013051 မသိလို့လက်မခံဘူးဖြစ်နေတယ်။
Ans : မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (နေပြည်တော်) MD – 013051 သို့ ငွေလွှဲ၍ပေးပို့ငွေသွင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Ans : အထောက်အထား file များကို PDF file format ပြောင်းပြီး5MB ထက်မကျော်သော file များ ခွဲ၍ ပို့ပါ။ File name ကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အမည်ပေးရန် လိုအပ်ပြီး အမည်တစ်ခုထဲအတွက် file တစ်ခုထက်ပိုနေပါက အမည်၏ နောက်ဆုံးတွင် 1, 2,3စသဖြင့် ထည့်ပေးပါ။
Ans : Submission ရရှိကြောင်း Auto Reply ပြန်ပါသည်။ Auto Reply မရောက်ရှိသော Company စာရင်းကို ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေးဌာနခွဲမှ သီးခြား email ပြန်ပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ Auto Reply မရရှိသော Company များအနေဖြင့် ဖုန်းနံပါတ် 092133307 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (Auto Reply မရရှိသော Company များသာ)
35. Ques: တင်ဒါအမှတ် cutd.3dph ၏ Tender Code – Tk14 ( Urine test strips)တွင် မည်သည့် parameter (eg. 2para/ 3para /11para)အားရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုကြောင်း သိလိုပါသဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရန် တောင်းခံအပ်ပါသည်။
Ans:2(or)3para ဖြစ်ရမည်။ (Urine – Sugar ၊ Protein Parameter အဓိကပါရမည်။)
36. Ques: အပိုဒ်(၁၅)တွင် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းတမျိုးချင်းအတွက် စျေးနှုန်းကို သတ်မှတ်စျေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာပုံစံဖြင့် တင်သွင်းရမည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ကြောင့် Brand မတူသည့် ဆေးပစ္စည်း item အား Form A ကို ၁ ဖိုင်စီ ခွဲ၍တင်သွင်းရမည်လား သို့မဟုတ် Form A (Excel File) တခုတည်းတွင်သာ ထို Brand2ခုအားဖော်ပြရမည်လား
Ans: Brand မတူပါက (၁) ဖိုင်စီခွဲ၍ တင်သွင်းရမည်။ Offer 1,2ခွဲ၍ ဖော်ပြရမည်။
Ans: Brand တူပြီး Packing Size မတူလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ တင်သွင်းမည့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍သော်လည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲမည့်ဈေးနှုန်းကို Option အနေဖြင့် ဖော်ပြရမည်။
Ans: Lot Consu2, Malathion 95% w/v ULV (25liter/Drum) Estimate Quantity 3000
ဆိုသည်မှာ 25liter ဆံ့ Drum 3000 ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Ans: Reagent group 1 မှတ်ချက် အမှတ်စဉ် (၄)တွင် (Lot 3,4,5) အလိုက်သက်မှတ်ထားသည့် တင်ဒါအာမခံကြေး (Tender Premium) ပေးသွင်းရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ Lot3အတွက် တင်ဒါအာမခံကြေး (၈၀,၀၀၀) ကျပ်၊ Lot4အတွက် တင်ဒါအာမခံကြေး (၃၁,၀၀၀) ကျပ်၊ Lot5အတွက် တင်ဒါအာမခံကြေး (၁၆၀,၀၀၀) ကျပ်အား တင်ဒါခေါ်ယူသည့်ဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Ans: Lot တစ်ခုတွင် ပါဝင်သော Items အားလုံး ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။
Ans: ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာကို လက်ရေး (သို့မဟုတ်)Typing ရိုက်ထားသာစာရွက်ကို လက်မှတ်ထိုး၍ Scan File ကို ပေးပို့ရမည်။
Ans: Test Kits နမူနာ တစ်မျိုး ၅ ဗူး ကို ရုံးအမှတ် (၄) နေပြည်တော် (သို့မဟုတ်) ရန်ကုန် ဗဟိုဆေးသိုလှောင်ရေးဌာနတစ်နေရာသို့သာ ပေးပို့ရန် လိုပါသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းလိုသော အချက်အလက်များရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ Inquire Form တွင် ဖြည့်သွင်း၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
DrNayWinAung on Contact & FAQ October 29, 2021
This email was registered as user level. You have to inquiry your company email that was used in company level…
DrNayWinAung on cptd.3.dms(2021-22 mini) October 29, 2021
Please contact to me. I want to check your process.
You had to register as company from company registration in MOHS. You are logging as user level now.Myanmar American Vision…
DrNayWinAung on cutd.2.dph.21-22 October 29, 2021
You had to register as company from company registration in Mohs. You are log in as user level now.
Thuka Kalyar Company Limited on cutd.2.dph.21-22 October 29, 2021
Dear Sir, We, have already registered company registration. However, it describe as ” tender List များ download ရယူရန်အတွက် company Registration…
Myamar American Vision Co.,Ltd on cptd.3.dms(2021-22 mini) October 26, 2021
please give me cptd.3.dms(2021-22 mini) PDF file . Thank You.
Wai Yan Oo on cptd.3.dms(2021-22 mini) October 18, 2021
I tried to sign up. I still didnt recieved Confirm code.
Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. on Contact & FAQ August 26, 2021
Dear Dr.Nay Win Aung We are Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. We registered our company at etender-mohs.com about one year…
Swe Zin WIn on Contact & FAQ July 13, 2021
Home Page မှာ Tender table တွင် Result date ကို နှိပ်လိုက်ပါက tender result ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင့်။
Are you able to download? Please contact Ph number on home page of etender website.
sorry for late reply. Received.
Concordia International Company Limited on Contact & FAQ July 7, 2021
cutd.9.Covid Emergency အတွက် online submit ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်… အရင်ဆို confimation email ပြန်ရောက်ပါတယ်ရှင့်.. အခုပြန်မရောက်လို့ပါရှင့်… ဖြေကြားပေးပါရှင့်
Toe Tet Toe Co. Ltd on COVID-19 ရောဂါကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်သော Inj: Remdesivir အရေးပေါ် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အဆိုပြု ဈေးနှုန်းလွှာ Quotation ခေါ်ယူခြင်း July 2, 2021
I can not find the Tender Form. How can I get it ?
Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. on Contact & FAQ July 1, 2021
Dear Sir We are Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. Although we have registered for e-tender and included in the registered…
Nae Kkeo Ya Company on Contact & FAQ April 7, 2021
cutd.1.dph(20-21) ရဲ့ Result ကိစ္စလေးလဲ သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Swe Zin WIn on Contact & FAQ February 17, 2021
Tender cutd.5.dph will close on 25 february.There is no changes at the moment. Thanks.
Swe Zin WIn on Announcement for Tender No. – cutd.4.dms(2020-2021) February 17, 2021
Cutd.3 သည် 10.2.2021 ရက်နေ့တွင် တင်ဒါပိတ်ပါတယ်ရှင့်။ Cons-2 and Reagent Lot1,Lot2, Lot3, Lot4ယှဉ်ပြိုင်သူမရှိ၍ တင်ဒါပြန်ခေါ်ပေးပါမည်။
Mahar Loka Company Limited on Announcement for Tender No. – cutd.4.dms(2020-2021) February 16, 2021
Cutd.3 အတွက် Form က Extension ပေးမှာပါလားရှင့် (သို့) ပိတ်သွားပြီလားရှင့်?
Win Sabei Company Limited on Contact & FAQ February 15, 2021
Dear Dr.Nay win Aung All Banks are not functioning at the moment and we are unable to deposit for tender…
Swe Zin WIn on Contact & FAQ February 10, 2021
Swe Zin WIn on အသိပေးကြေညာခြင်း (၄) February 10, 2021
Excel file တခုစီပို့ပေးလို့ရပါတယ်
email ပို့လို့ရပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ဆက်သွယ်ပါ။
Swe Zin WIn on cutd.2.dms January 30, 2021
တင်ဒါဖောင်ကြေးပေးသွင်းရာတွင်ဘဏ်မှအမည်နေရာတွင်ပေးသွင်းသူအမည်သာရေးခိုင်းပြီးလိပ်စာနေရာတွင်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရေးခိုင်းပြီးသွင်းခိုင်းသောကြောင့်ရပါသည်။ ချလံပေါ်တွင် ကုမ္ပဏီအမည်၊ ဝယ်ယူမည့် တင်ဒါအမှတ်စဉ်၊ Group name, ပစ္စည်း၏ Tender Codeတို့ကို ဖော်ပြပေးပါရှင့်။
Knowledge House Trading Co. Ltd. on cutd.2.dms January 29, 2021
Marlarmyaing Public Company Limited on Contact & FAQ January 27, 2021
cutd.3.dph(2020-2021) Tender form ေၾကးေပး သ ြင္းထားေသာ ခ်လံအား Scan pdf file ျဖင့္ email ပို႔ဖို႔အစဥ္မ ေျပလိုပါဆရာ ပို႔ရမယ္ Email လိပ္စာေလးသိခ်င္လို႔ပါဆရာ
Toe Tet Toe Co. Ltd on cutd.4.dms tender January 24, 2021
Nay Win Aung on Contact & FAQ January 22, 2021
please mail to naywinaung@mohs.gov.mm with the attached file of your company DICA Documents include company extracts. And the options that…
Mirai Holding Co.,Ltd. on Contact & FAQ January 22, 2021
Dear Sir, We, Mirai Holding Co.,Ltd. was completed company registered in E- Tender. We already got register No. 016. Now…
Nay Win Aung on cutd.4.dms tender January 22, 2021
Nay Win Aung says:
စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအား မကြာမှီ ပြန်လည်ဖြေဆိုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Aster Medical Co. Ltd says:
Dear Dr Nay Win Aung,
We have done company registration for Aster Medical Co Ltd using email (info@aster-medical.com) & (maysannmaung@gmail.com) which lead to double registration.
I haven’t seen the name of Aster Medical Co Ltd in registered company list until now.
Kindly check the reason of not appearing in the registered company list and kindly deleted 1 registration which used maysannmaung@gmail.com.
Dr May Sann Maung
Aster Medical Co Ltd
AA Medical Products Ltd says:
တင်ဒါအောင်မြင်သူများနံပါတ်(၂၅)( ဃ) တွင် သတ်မှတ်ချိန်ကို တင်ဒါအောင်စာရင်း ထွက်ရှိပီး / စျေးနုန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုပီးနောက် email ဖြင့် အမှာစာ ပေးပို့သည့် ရက်တွင် စတင်ရေတွက်ပါမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိပါသည် ထိုအမှာစာတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ/ ဆေးရုံများနှင့် ဝယ်ယူရေး စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် တင်ဒါအောင် ပစ္စည်း အမျိုးအစားများ၏ အရေအတွက်ပါ ဖော်ပြပါရှိပါမည်လားကို သိရှိလိုသည် ဆရာရှင့်
Khine Chan says:
(၁) ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူစဉ်က ဖော်ပြထားသော တစ်နှစ်စာခန့်မှန်းအရေအတွက်ပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
(၂) အမှာစာတွင် တင်ဒါအောင် ပစ္စည်းအမျိုးအစား (ပ)ကြိမ် ဝယ်ယူမည့် အရေအတွက် ဖော်ပြပါရှိပါမည်။ တင်ဒါလမ်းညွှန်နံပါတ် (၂၅) အပိုဒ်(ဂ)တွင် အမှာစာပေးပို့မည့် အချိန်နှင့် ပစ္စည်းပေးသွင်းရမည့် အချိန်များ ဖော်ပြထားပါသည်။ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲ၍ အမှာစာပေးပို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အမှာစာပေးပို့တိုင်း အရေအတွက်ပါ ဖော်ပြပါရှိပါမည်။
PACIFIC MEDICAL INDUSTRIES LTD says:
I have received user ID & Pwd as well by mail but still not able to download the form. Not able to find the place where i need to upload the bank slip of 50,000 ks to proceed further.
company အနေဖြင့် ဝင်ရောက်မှာသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် user မှ log out ဦးစွာပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြန်လည် log in ပြုလုပ်ပါ။
Creative Health Care Co., Ltd. says:
ဆရာရှင့် Creative Health Care Co., Ltd. မှ PO Cheque မူရင်း၊တင်ဒါဖောင်ကြေးချလံမူရင်း၊Tender Sample များကို (18.1.2021)တွင် ချောစာပေးပို့ထားပါသဖြင့် ရုံးအမှတ် (၄)သို့ ရောက် မရောက်သိချင်ပါတယ်ရှင့်
Mirai Holding Co.,Ltd. says:
We, Mirai Holding Co.,Ltd. was completed company registered in E- Tender. We already got register No. 016.
Now we’re open another new company email for Tender . So we would like to change with new email (miraiholding.td@gmail.com) in company registration.
We can’t edit ” Your profile ” as you commend. Please let us know how can I edit ?
Mirai Holding Co.,Ltd.
please mail to naywinaung@mohs.gov.mm with the attached file of your company DICA Documents include company extracts. And the options that you want to change your profile.
Marlarmyaing Public Company Limited says:
Win Sabei Company Limited says:
Dear Dr.Nay win Aung
All Banks are not functioning at the moment and we are unable to deposit for tender form fees.. Tender cutd.5.dph will close on 25 february. How if we cant deposit tender form fees until then? Do you have any suggestions for banking matters please? Thanks.
Concordia International Company Limited says:
cutd.9.Covid Emergency အတွက် online submit ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်… အရင်ဆို confimation email ပြန်ရောက်ပါတယ်ရှင့်..
Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. says:
We are Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd.
We registered our company at etender-mohs.com about one year ago. But we cannot download tender forms at the website. Now, we cannot even access the registered company list at the website.
We tried to re-register at the website but the website shows “the user name and email is already exist’ which means Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd. is already registered at the website. But somehow, we cannot access and download tender forms.
So, please kindly guide us on how to overcome this technical problem.
Please kindly also check our company registration file of DICA.
Tender Operation Team
Ni Tun Oo Trading Co.,Ltd.
This email was registered as user level. You have to inquiry your company email that was used in company level registration. Your company was registered with ******lay@gmail.com in company registration.